KuPetru noPawulu nibona ngokucacile ukuthi uPetru owaqaphela iqiniso. Kulokho uPetru adlula kukho, kuyabonakala ukuthi lokho adlula kukho kwaqoqa izifundo zalabo ababekade behlulekile ngaphambilini, futhi wathola amandla kwabangcwele besikhathi esedlule-futhi kulokhu kuyabonakala ukuthi kwakuyiqiniso kangakanani okuhlangenwe nakho kukaPetru, futhi kwakwanele ukuvumela abantu ukuthi bazithinte, babe nokwazi futhi, nanokuthi kwakungenziwa ngabantu. UPawulu, nokho, wayehlukile: Zonke izinto akhuluma ngazo zabe zingaqondakali, futhi zingabonakali, izinto ezinjengokuya ezulwini lesithathu, ukukhuphukela esihlalweni sobukhosi, kanye nomqhele wokulunga. Wagxila kulokho okungaphandle: esikhundleni, futhi exwayisa abantu, ngokuzikhukhumeza ngesikhundla sakhe esiphakeme, ukuthintwa nguMoya oNgcwele, njalo njalo. Ayikho into ayiphishekela eyabe iyiqiniso, futhi okuningi kwabe kufeketha kungelona iqiniso, ngakho kungabonakala ukuthi konke lokho okungesikho okwemvelo yasemhlabeni, njengokuthi uMoya oNgcwele ubathinta kangakanani abantu, intokozo enkulu abantu abayijabulelayo, ukuya ezulwini lesithathu, noma ukuqeqesha njalo nokujabulela kuze kube ezingeni elithile, ukufunda izwi likaNkulunkulu nokukujabulela lokhu kuze kube ezingeni elithile—konke lokhu akukho. Wonke umsebenzi woMoya oNgcwele ujwayelekile futhi uyiqiniso. Uma ufunda amazwi kaNkulunkulu futhi uthandaza, ngaphakathi uzizwa uphapheme futhi ugxilile ungena kuzanyazanyiswa, umhlaba ongaphandle awukwazi ukugxambukela kuwe, ngaphakathi uzimisele ukuthanda uNkulunkulu, uzimisele ukuhlanganyela nezinto ezinhle, futhi uyawuzonda umhlaba omubi; lokhu ukuphila ngaphakathi kukaNkulunkulu. Akukhona ukuzijabulisa kakhulu, njengoba abantu besho—inkulumo enjalo ayilona iqiniso. Namuhla, yonke into kufanele iqale eqinisweni. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo iyiqiniso, futhi ezintweni odlula kuzo, kufanele uqaphele ukwazi ngempela uNkulunkulu, kanye nokufuna izimpawu zomsebenzi kaNkulunkulu nezindlela uMoya oNgcwele othinta futhi okhanyisela ngayo abantu. Uma udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi uthandaza, uphinde ubambisane ngendlela eyiqiniso kakhulu, wetshisa lokho okulungile ezikhathini zakudala, futhi wenqaba lokho okubi njengoPetru, uma ulalela ngezindlebe zakho futhi ubuke ngamehlo akho, uphinde uthandaze futhi uzindle enhliziyweni yakho, futhi wenze konke ongakwenza ukubambisana nomsebenzi kaNkulunkulu, ngokuqinisekileyo uNkulunkulu uyokuhola.